Trano tokana ho an'ny varotra - trano tsy mahazatra manerantany | Finday manokana
Finday manokana? Inona no mamaritra ny mahita manokana?
Fandriana sy sakafo maraina na AirBnBs
Kastily sy Chateaus amidy
Fiangonana niova fo
Trano fialokalofana, honenana na ambanin'ny tany
Fambolena sy fiompiana soavaly
Cabins & Trano Rustic
Fonon-tena mahavita tena, vonona ary homena ivelan'ny kizo
Tany sy velarantany
Fananana miavaka eo amin'ny vahoaka
Maherin'ny 75,000 ny mpividy trano te-hahita ny fanananao
Andao ataontsika malaza io!
40 $ / Volana
Brenda! Tsara ity! Misaotra anao tamin'ny asanao sy ny sainao tamin'ny antsipiriany. Fandrafetana sy fandrafetana tsara. Io dia ambony sy mihoatra ny nantenaiko.
Jane M. (Amidin'ny Tompony)
Misaotra anao! Ny tranokalanao dia tena mitondra mpividy tsy manam-paharoa tonga lafatra! Fitahiana lehibe re izany!
Beth P (Amidin'ny Tompony)
Salama maraina Brenda, Namidinay ny tranonay! Ny tolotra feno vola dia tsy misy fihoaram-pefy na oviana na oviana! Faly be aho, tsy afaka manomboka milaza aminao. Mankasitraka ny nataonao rehetra aho. Tena hanome toro-hevitra ny serivisinao sy ny tranokalanao aho.
Patricia E. (Amidin'ny Tompony)
Ry Brenda malala, efa nihoatra ny antso adidy ianao. Tena talanjona amin'ny asanao manokana sy ny fikasanao ...
Elizabeth S (Amidin'ny Tompony)
Doka mahafinaritra tokoa izany - Wow! Misaotra anao, Brenda, noho ny mpamosavy anao!
Walter (amidy amin'ny tompony)
Te hilaza fotsiny aho fa misaotra anao noho ny fanampianao rehetra. Ny famaritanao ny trano dia nitondra mpividy mety ho tonga tao an-trano. Betsaka ny olona nahita an'io ary namidy 20K ny vidiny nangataka! Mbola nahazo antso ihany aho. Heveriko fa ny famaritana nataonao dia nanampy tamin'ny fahazoana tolotra nangataka ambony.
Pat (Amidin'ny Tompony)
Toa tsara tarehy. Asa mahafinaritra no nataonao. Tena gaga aho. Tsy afaka misaotra anao loatra aho tamin'ny ezaka natao. Tsy afaka faly kokoa aho.
Manankarena (amidy amin'ny tompony)
Tsy afaka misaotra anao aho noho ny fanampiana sy ny fanampiana rehetra nomenao teny an-dalana. Raha tsy noho ianao dia tsy fantatro fa ho lasa lavitra aho tamin'ity dingana ity. Nomenao fampaherezana be dia be aho taloha, ary isaky ny miantso aho dia valio. Midika izao tontolo izao tamiko.
Monique (Amidy amin'ny tompony)
Misaotra anao!!! Master Marketer ianao. Tonga dia nisy ny valiny! Azonao atao ny mampianatra fampianarana momba ny varotra Brenda! Tena ho laharana voalohany aho.
Brenda, TENA MAHAGAGA ianao tamin'ny famaritana ny lisitra. MISAOTRA ANAO - ho anao"finoana" & hafanam-po momba ny lisitry ny fanananay.
N. Kuhn sy ny ankohonany (amidy amin'ny tompony)
Tena miavaka ianao toy ny kintana mamirapiratra amin'ny lafiny matihanina, fahombiazana, hafanam-po ary fikarakarana. Tiako ny amidy ny trano amin'ny alalanao noho ireo antony ireo. Mirary ny soa indrindra!
Fran G (Amidin'ny Tompony)
Tiako fotsiny ny fomba fampiarahanareo ny pejinao. Manokana fotoana tena hamakiana sy hahazo fahatsapana ary handray ireo teboka avo lenta ianao. Tena tsy fahita izany ary mampiavaka anao! Sambatra izahay manana anao. Misaotra betsaka anao ~
Tena milay ianao! Tian'ny mpivarotra ny nataonao!
Meg L. (Agent Edina Realty)
Misaotra anao noho ny fahamendrehanao sy ny asa nandanianao ny fisie.
Guy L. (amidy amin'ny tompony)
Mbola manao asa mahatalanjona indray ianao!
Azoko antoka fa mankasitraka ny fijerinao tsara ny lisitray miaraka aminao izahay 🙂
Angela B (amidy amin'ny tompony)
Toa tsara tarehy foana!
Ity dia dingana mora tokoa ary tiako ny fanampianao rehetra!
OAY! Mahagaga ahy ny valiny. Misaotra betsaka!
Voalahatra hikatona ny tranonay amin'ny zoma! 🙂 Misaotra anao tamin'izay nataonao rehetra. Nanampy ahy ny filazanao ahy hoe "avelao handeha". Sarotra izany!
Bethany M (Amidin'ny Tompony)
Tsy nampoiziko mihitsy hoe hiasa mafy toy izao ianao amin'ny inona nandany ahy izany. Misaotra anao. Ianao dia orinasa classy.
Sam (Amidin'ny Tompony)
Salama, Brenda, izaho te hampahafantatra anao fa manana izahay nanaiky ny tolotra tao an-tranonay! Misaotra betsaka tamin'ny asa mafy nataonao tamin'ny marketing ny tany ho an'izao tontolo izao!
Carl (amidy amin'ny tompony)
Toa tsara Brenda ary mihoatra ny andrasako. Faly aho fa nahita ny tranonkalanao!
Matt (Agent an-trano tsara kokoa)
Jereo ny trano tokana ho an'ny varotra
Hot Springs, Dakota Atsimo 57747
4 Feno, 1 Tapanyfandroana
Fananana an-tampon-tendrombohitra Off-Grid
Trano Hobbit any Vermont!
Kely Log Cabin
1643 Fanjakana Rt 46
Jefferson, NY 44047
3 Feno, 1 Tapanyfandroana
Unicorn House ao afovoan-tanànan'i Atlanta
5595 Etazonia Highway 278
Fiovan'ny fiangonana mankany an-trano
2 feno, antsasaky ny 1fandroana
4 Feno, 2 Tapanyfandroana
Jereo ny trano tokana rehetra misy antsika
Famaranana ny tokantranonareo?
Lazao ny fananako - 40 $ / Volana
Manangana fanentanana ho ahy
Azonao atao izao ny mandefa ny fanananao tsy manam-paharoa amin'ny tranokalanay $ 40.00 isam-bolana!
Na, afaka manangana programa fanatanjahan-tena manokana ho anao ianao!
Ny Finds manokana dia manasokajy ireo fananana amin'ny fomba miavaka. Raha te hivarotra ny fanananao tsy mahazatra ianao dia ho voatanisa sy hamidy tanteraka eto - na - raha te hividy ianao, kitiho ny fomban-tany mahaliana anao.
“Finds…” manokana - Mikaroha ny tranonay tsy manam-paharoa amidy amin'ny sokajy fananana
Manana trano tsy manam-paharoa tianao ho hitanao ao amin'ny tranokalanay ve ianao?
Hosorinay ho anao ny karipetra mena!
Nahoana aho no nanomboka "Finds ..." manokana?
Ny hevitra hoe «Finds…» manokana dia nivoatra tamin'ny zavatra niainako manokana tamin'ny naha-mpividy ahy, ary avy eo tamin'ny naha mpivarotra ahy - taloha kelin'ny naha- trano tena trano.
Tahaka anao, manana trano tsy manam-paharoa amidy aho. Amin'ny maha-mpividy ahy dia kivy aho niasa tamin'ny orinasam-pananana nentim-paharazana izay tsy nahatakatra fa nitady trano tsy manam-paharoa aho, ka nasehon'izy ireo ahy hatrany ireo fananana mahazatra sy mahazatra izay tafiditra ao anatin'ny faritry ny MLS misy azy ireo.
Rehefa vonona ny hivarotra ny tranoko tsy manam-paharoa aho dia hitako fa ireo orinasa nentim-paharazana dia tsy nanana fahalalana, fahaiza-manao ary traikefa hivarotana fananana tsy mahazatra, noho izany, nandany ny fahaizako tamin'ny marketing nandritra ny taona maro lasa talen'ny Marketing an'ny New York Stock Exchange aho, natambatra ity miaraka amina fahazoan-dàlana hamenoana ny banga tena ilaina amin'ny indostrian'ny trano sy voila! Teraka ny «Finds…» manokana!
Mivarotra sy mampiroborobo ny fananana tsy mahazatra sy trano tokana amidy izahay.
Avelao izahay hanampy anao. Agence doka ho an'ny trano tsy mahazatra izahay. Realtors koa izahay natokana hividianana trano tsy manam-paharoa.
Famolavolana biofilika - Manampy izany ao an-tranonao